Zom-pirenena vanuatu: fanasana avy amin'ny paradisa
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Zom-pirenena vanuatu: fanasana avy amin'ny paradisa
Tsy misy visa any Eropa, i Russia dia iray amin'ireo tombontsoa ankafizin'ny olom-pirenena Vanuatu. Vanuatu dia manasa an'izao tontolo izao ho tonga mpiray tanindrazana. Ny Repoblikan'i Vanuatu amin'ity volana ity dia mandefa delegasiona avy amin'ny governemanta any Bangkok mba hanao andiam-panazavana momba ny Varotra, Fizahan-tany ary ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao amin'ity firenena nosy Pasifika atsimo ity.
Zanatany britanika sy frantsay taloha, Vanuatu (The New Hebides teo aloha) nahazo fahaleovan-tena tamin'ny 1980 ary mpikambana ao amin'ny Commonwealth Britanika hatrany. Mivelatra ny halavirana 1,300km any avaratra mankany amin'ny nosy atsimo misy nosy 83 (65 mponina), ny mponin'i Vanuatu 285,000 dia mankafy ny fankasitrahana ho toerana dimy voalohany "toerana falifaly indrindra eto an-tany" araka ny "Happy Planet Index" 2016. Tsy dia narovan'ny fizahan-tany marobe i Vanuatu fa manana fisarihana isan-karazany manomboka amin'ny fisitrihana scuba amin'ny rano madio mangarahara, hatramin'ny fisorohana lavenona eo an-tampon'ny volkano mavitrika iray. Firenena azo antoka sy milamina, Vanuatu dia tsy manana tafika ara-dalàna ary miantehitra amin'ny fiarovana azy any Aostralia mpifanila vodirindrina aminy.
Ny Delegasiona Vanuatu, notendren'ny praiminisitra Vanuatu, Charlot Salwai, hitsidika an'i Thailand mandritra ny 25th-29th Septambra. Ny votoatin'ny fitsidihana dia ny fanohanana ny fandefasana ny tambajotram-pifandraisan'ny governemanta ekena eo ambanin'ny marika "Vanuatu Information Center" (VIC).
Ny foiben-toeran'ny VIC dia any Port Vila, Vanuatu, na izany aza, Bangkok dia nofidina ho ivon'ny hetsiky ny VIC manerantany, nomena ny toerana misy azy ary manamora ny maha foibe fitetezam-bahiny iraisampirenena. Avy any Bangkok, ny Port Vila renivohitr'i Vanuatu dia mora aleha amin'ny alàlan'ny Brisbane, Sydney na Auckland, saingy kasaina hatao ny hampandeha sidina mivantana avy any Bangkok mankany Vanuatu, mba hampiroboroboana ny fifandraisana ara-barotra sy fizahantany any amin'ny faritr'i Azia Pasifika.
Serivisy iray lehibe amin'ny tambajotra VIC ny fiasa ho toy ny fantsom-barotra ho an'ny programa Vanuatu “Citizenship by Investment” (CIP). Ny programa dia manolotra ny olona tsirairay hanana fahazoana zom-pirenena faharoa honina ao amin'ny fanjakana mpikambana ao amin'ny Commonwealth Britanika, ho takalon'ny fandraisana anjara amin'ny Vola fampandrosoana ny governemanta Vanuatu.
Nantsoina hoe "Programme Fanohanana ho fampandrosoana" (DSP) i Vanuatu, ity fandaharan'olom-pirenena ity dia loharanom-bola ilaina amin'ny fampandrosoana ho an'ny firenena. Ireo manana pasipaoro Vanuatu dia mahazo tombony lehibe - toy ny fitsangatsanganana tsy misy visa any amin'ny firenena 125 - ao anatin'izany ny UK, Schengen Europe ary Russia - miaraka amin'ny firenena maro kokoa no ampiana isan-taona.
Ny antsoina hoe "CIP" dia miely any amin'ny Firenena Karaiba ary nihanaka be tao anatin'ny folo taona lasa, na izany aza, ny DSP an'i Vanuatu dia miavaka amin'ny voalohany, ary ny CIP ihany no karazany ao amin'ny Hemisphere Asia Pacific - manana tombony ara-jeografika mazava ho an'ny tsenan'ny APAC.
Ny CIP dia mahazo vahana haingana - indrindra eo amin'ireo olona avo lenta (HNWI) mitady ny tombony atolotra amin'ny fananana pasipaoro faharoa, na ho an'ny fanamorana ny fivezivezena iraisampirenena sy ny fiarovana azy manokana - ary koa ny zom-pirenena amin'ny toerana azo antoka sy "fialofana haba" . Thailand dia tsy nanjary mpitarika tsena tamin'ny resaka olona mitady zom-pirenena faharoa, fa ny teratany Thai sy ny mponina vahiny kosa dia mitodika hatrany amin'ny CIPs ho toy ny singa sarobidy tokoa ao amin'ny portfolio-n'ny fananan'izy ireo manokana.
Manome hevitra momba ny fitsidihan'ny delegasiona ho avy, ny filohan'ny VIC sy Hon Consul ho an'i Vanuatu mankany Vietnam, (Lord) Geoffrey Bond dia nilaza fa: "The Programme Support Support dia manome fahalalahana amin'ny fivezivezena eran'izao tontolo izao, nefa ny zava-dehibe dia manome pasipaoro mankany amin'ny paradisa tena izy. izay manolotra tombontsoa mahavariana ho an'ny fizahan-tany, fiainana ary fampiasam-bola. Nanasa an'ity delegasiona ity izahay mba hanomezana fahafaha-manao ireo antoko liana hihaona sy hiresaka mivantana amin'ireo solontenan'ny Governemanta Vanuatu, hahafantatra tsara kokoa ireo fotoana miavaka atolotry ny DSP sy i Vanuatu ”.
Ankoatry ny fampiroboroboana ny varotra sy ny fizahantany, ny delegasiona Vanuatu dia hikatsaka ny hanokatra dinika momba ny fidirana tsy misy visa ho an'ireo manana pasipaoro Vanuatu mankany Thailandy, satria ny Thai Nationals dia efa mankafy fahazoana visa afaka 30 andro mankany Vanuatu. Ny fihetsika toy izany dia hanatsara ny fahasarotan'i Thailand satria sady toerana fitaterana ho an'ny mpandeha ho any Vanuatu, nefa koa mampiroborobo ny varotra sy ny fizahan-tany haingana kokoa eo amin'ny firenena roa tonta.
Ny delegasiona dia tarihin'ny solombavambahoaka Andrew Andrew Napuat, sekretera parlemantera ao amin'ny minisiteran'ny Atitany, miaraka amin'ny portfolio an'ny Passport & Immigration Services. Nanazava i Andriamatoa Andrew Napuat: “Faly aho fa nanao io fitsidihana voalohany io tany amin'ny fanjakan'i Thailand. Amin'ny anaran'ny praiministintsika Hon Charlot Salwai dia hitarika vondrona iray amin'ny solontenan'ny governemanta aho, izay samy manolotra fahaiza-manao manokana mifandraika amin'izany, mba hahafahana manao fampahalalana feno momba ny lafiny varotra sy fizahantany, miampy ny fandaharam-pirenen'i Vanuatu izay vao natomboka faharoa, ny Programme Fanohanana ny fampandrosoana. Manantena mafy aho hanatsara ny fifandraisanay amin'i Thailand ho tombontsoantsika tsirairay.
Ny ivon'ny fitsidihana dia ny hetsika izay hatolotry ny delegasiona ny taratasy ofisialy fanendrena ny Harvey Law Group (www.harveylawcorporation.com) amin'ny maha-solontena voalohany an'ny Vanuatu Development Support Program.
Andriamatoa James Harris, Tale mpitantana ny tambajotra VIC dia nanamarika fa ny fanendrena amin'ny fomba ofisialy ny Harvey Law Group ho solontena manerantany dia midika fiakarana lehibe eo amin'ny mombamomba ny Programa Fampandrosoana ho an'ny fampandrosoana, mifanaraka amin'ny hetahetantsika hahazoana toerana iray amin'ny iray amin'ireo tontolo mitarika ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny Programme Investment. Harvey Law Group, miaraka amin'ny tanjany sy ny halaliny manokana any Azia Pasifika dia maneho taratra ny dian-tongotra isam-paritra misy antsika ankehitriny. Manantena mafy izahay ny hanohana ny Harvey Law Group amin'ity hetsika vaovao ity ”.
Miaraka amin'ny birao dimy efa miakatra sy mihazakazaka any Azia ary tambajotra mpandraharaha mivoatra haingana, VIC dia mikendry ny ho any Shina sy UK ao anatin'ny enim-bolana manaraka, ary hanitatra geografia fanampiny mandritra ny taona 2018.
Ny VIC Network dia misy hatrany Port Vila, Bangkok, Ho Chi Minh, Hanoi, Phnom Penh, Hong Kong.
Mpandray anjara amin'ny sidina bikini tanora mahafatifaty mandray anjara amin'ny Fiara Balloon